CAMERAS – DigitalTimes.com.mm
698 shares381 views
Dual-camera ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ???
အခုဆို ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းတွေမှာ dual-camera တွေကို အပြိုင်အဆိုင် ထည့်လာကြတာတွေ့လာရပါတယ်။ ဒီတော့ dual-camera နဲ့ပတ်သတ်သမျှလေးတွေကို ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဒါဆို Dual-camera ဆိုတာဘာလဲ?? Dual-camera ဆိုတာကတော့ ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းယူဖို့အတွက် Lens နှစ်ခုနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီ lens…
Apple, cameras, Google
842 shares331 views
လှုပ်ရှားနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးရာမှာ iPhone X, Pixel2တို့ထက်သာသွားတဲ့ Galaxy Note 8
ကင်မရာတွေသုံးတဲ့နေရာမှာ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေကိုတော်တော်ကြီးသုံးလာကြပြီး ပြီးခဲ့တဲတစ်ပတ်ကစစ်တမ်းအရဆိုရင် iPhone ကိုသုံးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းတိုင်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်အလုံးတိုင်းကတော့ iOS နေနေ Android နေနေ ပိုကောင်းတဲ့ ကင်မရာ feature တွေကိုသုံးကြတာပဲဖြစ်လို့ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းတွေဆိုလို့ iPhone X, Pixel…
U Min Thant - Sep 18, 2016
Leica ရဲ့ ကင်မရာတွေဟာ တစ်မူထူးခြားပြီး ကွဲထွက်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ ရုပ်ပုံထွက်အရည်အသွေးနဲ့ “ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု” စတာတွေကြောင့် လူသိများကျော်ကြားပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှာလည်း Leica ဟာ ဒီဇိုင်းလွန်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုကိုယထည် Limited Edition ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကို ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ကင်မရာကို M-P Titanium လို့နာမည်ပေးထားပြီး Leica…
အဆင့်မြင့်၊ တန်ဖိုးသင့် Instant ကင်မရာအမျိုးအစားတစ်မျိုးကို Leica ထုတ်လုပ်
U Min Thant - Sep 17, 2016
ဂျာမန်ကင်မရာ ကုမ္ပဏီ Leica ဟာ တန်ဖိုးသင့်တင့်တဲ့ instant ကင်မရာ အမျိုးအစားသစ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကင်မရာကို Sofort လို့ နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ ဒေါ်လာ ၃၀၀နဲ့ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Leica ရဲ့…
U Min Thant - Sep 12, 2016
Sony ဟာ Action ကင်မရာအမျိုးအစားသစ် နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ FDR-X3000R နဲ့ HDR-AS300R တို့ကို မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြား အဓိက ကွာခြားချက်ကတော့ FDR-X3000R ဟာ 4K UHD အရည်အသွေးရှိတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ Full…
Nikon ရဲ့ D3400 DSLR ကင်မရာ ထွက်ရှိလာ
Nikon ရဲ့ အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ D5 ကင်မရာကို လူတိုင်းကိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါကင်မရာအမျိုးအစားဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အော်င လုပ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ယခုအခါမှာတော့ နည်းနည်း အဆင့်နိမ့်တဲ့ DSLR အမျိုးအစားသစ် D3400 ကို…
Huawei P9 ဖုန်းရဲ့နမူနာဓာတ်ပုံက ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ တန်ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံဖြစ်နေ
Huawei ကုမ္ပဏီဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ စမတ်ဖုန်း P9 ကို Dual Camera ပါဝင်ပြီး စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုတော့ သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ တန်ကင်မရာတစ်မျိုးနဲ့…
၁၉၂၃ခုနှစ်ရဲ့ ဒီနေ့မှာ ၁၆မီလီမီတာဖလင်စနစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်
U Min Thant - Jul 05, 2016
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉၀ကျော် ၁၉၂၃ ခုနှစ်ရဲ့ ဇွန်လ ၅ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Kodak ဟာ ၁၆မီလီမီတာ ဖလင်စနစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဒီစနစ်ဟာ ၃၅မီလီမီတာ စနစ်မတိုင်ခင်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကင်မရာမန်းတွေရဲ့ အသုံးပြုမှုအများဆုံးစနစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ၁၆မီလီ စနစ်ဟာ…
DSLR အရည်အသွေးရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံလည်းလိုချင်တယ်၊ ကင်မရာကလည်း ကြီးလွန်းနေတယ် ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် dSLR ဖြည့်စွက် (သို့) အစားထိုး ကင်မရာအသေးစား မော်ဒယ်လေးတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာ မော်ဒယ်တွေမှာ high-end dSLR တွေရဲ့ sensor အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့ sensor တွေပါရှိပါတယ်။…
Creepy Tyler - Feb 18, 2016
Creepy Tyler - Feb 17, 2016